भुटेको मकै खानुकाे १० फाइदाहरू यसप्रकार रहेका छन्, जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
गाउँघरमा दैनिक खाजाका रुपमा प्रयोग गरिने भुटेको मकै शहर बजारमा भने सोखका लागि मात्र खाने गरिएको छ । तर नियमित भुटेको मकै खाँदा पुग्ने फाइदा अनेक छन् । फाइबरको मात्रा अधिक हुने आइरन, कपर, र फस्फोरसको मात्रा धेरै हुने भएकाले यसले पाचनका साथै हड्डीलाई पनि राम्रो गर्छ ।
भुटेको मकै खानुका १० फाइदाहरू यसप्रकार रहेका छन्
१ भुटेको मकै खाँदा दातको व्यायायम गराउँछ । मकै खादा दात सफा गर्ने र बलियो बनाउछ ।
२ भुटेको वा पोलेको मकैमा कार्बोइड्रेडको मात्र पर्याप्त हुने भएकोले यसले शरीरलाई पर्याप्त उर्जा दिन्छ ।
३ भुटेको मकैमा फाईबरको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । यसले पाचन प्रणालीमा सुधार गर्छ । भुटेको मकै खाने मानिसलाई एसिडिटी र कब्जियतको कहिल्यै समस्या हुदैन् ।
४ भुटेको मकैमा आइरन, कपर, र फस्फोरस र म्याग्नेसियमको मात्रा प्रर्याप्त हुने भएकोले शरीरमा हड्डीलाई मजबुत बनाउँछ ।
५ यसमा आईरन, भिटामिन बी १२, फोलिक एसिडको मात्र प्रर्याप्त हुन्छ । यसले शरीरमा रगत अभावको समस्याबाट जोगाई कम्जोरी हुनबाट बचाउँछ ।
६ भुटेको मकैमा भिटामिन सी, केरोटिनाईड, बायोफ्लेविनाईड हुन्छ जसले रक्त प्रबाहलाई तीब्र बनार्ई रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ।
७ यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । मुटु रोगको खतराबाट बचाउँछ ।
८ सबै खानेकुरामा विषादीको मात्रा बढि रहेका बेला मकैले विषादीयुक्त खानाबाट पनि टाढा पुर्‍याउँछ ।
९ मकै आडिलो हुने भएकाले ग्यास्ट्रिकको समस्या हुनेका लागि पनि अचुक औषधी नै हो ।
१० भुटेको मकैलाई तातो पानीमा केही बेर उमाल्नुहोस । यस पानीलाई छानेर मिश्रि मिसाएर खाँदा पिसाब पोलेको वा किड्नी कम्जोरीको समस्या समाधान हुन्छ ।
मकैको सेवनले शरिरमा जमेको अतिरिक्त बोसो अर्थात् कोलेस्ट्रोलाई कम गर्ने सबैभन्दा असरदार तरिका हो । मकै खादा तौल घट्नुका साथै अन्य रोगको निराकरणका लागि पनि निकै फाइदा हुन्छ ।
मकैमा भिटामिन सी, बायोफ्लेविनाइड्स, क्यारोटेनाइड र फाइबरको मात्रा धेरै पाइन्छ ।
यसले कोलेस्ट्रोललाई कम गरेर धमनीहरु ब्लक हुनबाट रोक्छ । यसमा पाइने फाइबरले कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रित गर्न सहायक गर्दछ ।
मकैमा पाइने एन्टी अक्सिडेन्ट र फ्लेवेनाइड तत्वका कारण क्यान्सरजस्ता खतरनाक रोगको खतरा पनि कम हुन्छ । यसका साथै यसले फ्रि रेडिकल्सबाट हुने नोक्सानीबाट बचाउँछ । मकैमा पाइने फेरुलिक एसिड, स्तन र कलेजोको ट्युमरको आकारलाई पनि कम गर्नमा सहयोग गर्दछ ।
हड्डीलाई बलियो बनाउछ
हड्डीलाई बलियो बनाउनका लागि तपाईं दुध र भिटामिन डी को सेवन गर्नुहुन्छ । तर तपाईंलाई थाहा नहोला, मकैमा पाइने जिंक, फोस्फरस, म्याग्नेसियम र आइरनले हड्डीलाई बलियो बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गर्दछ । यसका साथै यसले बाथ रोगको सम्भावना पनि कम गर्दछ ।
छालालाई चम्किलो बनाउँछः
छालालाई चम्किलो बनाउनका लागि तपाईं के मात्र गर्नुहुन्न तर मकैको सेवन गर्दा छाला सुन्दर, मुलायम र चम्किलो हुन्छ । वास्तवमा मकैमा भिटामिन ए र सी राम्रो मात्रामा पाइन्छ । यसका साथै एन्टी–अक्सिडेन्ट फ्री र्डिकलबाट बचाएर अनुहारमा चाउरी पनए दिँदैन ।
आँखाको लागि फाइदाजनकः
मकैमा बिटा–क्यारोटिन, भिटामिन ए हुन्छ जुन आँखाको लागि निकै फाइदाजनक छ । यसले आँखाको समस्यालाई कम गरेर, ज्योती बढाउँछ । यसका साथै बढ्दो उमेरसँगै हुने रतन्धोलगायतका सम्भावना कम गर्दछ ।
यदि तपाईंलाई अल्छी लाग्छ र शरिरमा ऊर्जा छैन जस्तो अनुभव हुन्छ भने मकैको सेवन गर्नुहोस् । मकैमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ जसले शरिरलाई ऊर्जावान् राख्छ । यो खाँदा पेट चाँडै नै भरिन्छ र तपाईंलाई धेरैबेरसम्म ऊर्जावान् राख्दछ ।
यस बारे पनी जान्नुहाेस्ः
Don't Miss it एकता टुट्दा कसरी पतन हुन्छ ? : एक प्रेरणादायीक कथा ( भिडियाेसहित )
Up Next ५ दिमाख खियाउने प्रश्नाेत्तर
केराको फाइदाको बारेमा तपाईले धेरै सुनेको पढेको हुनुहुन्छ होला । केरामा पोषक तत्व पाइन्छ । यसको सेवन गर्नाले हाम्रो शरीरलाई…
आजै आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्नुहोस् नत्र यस्ता खतरनाक रोगहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ
मानिसहरुको जीवनशैलीले गर्दा आजभोली उनीहरु दिनप्रतिदिन विभिन्न रोगहरुको शिकार हुदै गईरहेका छन् । अहिलेका केटाकेटीहरु प्रविधिले गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि…
सम्बन्धमा आत्मीयता कसरी ल्याउने ? अब यसरी सम्बन्धलाइ सुमधुर बनाउनुहोस्
पहिले हामी ठूलो परिवारसँग बस्थ्यौँ । परिवार सदस्य संख्या न्यूनतम १०/१२ जनादेखि २०/२५ जनासम्मको हुने गथ्र्याे । एक अर्कासँग धेरै…